कसरी हटाउने धेरै सोंच्ने बानी?
कसरी हटाउने धेरै सोंच्ने बानी? यस्ता छन् सजिला विधिहरु (भिडियाे हेर्नुस्) । वर्तमानलाई हेरेर भन्दा बढी हामी विगत र भविष्यलाई दिमाग राखेर बाँचिरहेका हुन्छौं ।
बिहिबार, कार्तिक २५, २०७८ २:३३
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। कसरी हटाउने धेरै सोंच्ने बानी? यस्ता छन् सजिला विधिहरु (भिडियाे हेर्नुस्) । वर्तमानलाई हेरेर भन्दा बढी हामी विगत र भविष्यलाई दिमाग राखेर बाँचिरहेका हुन्छौं । जसले गर्दा अनावश्यक सोंचहरु जन्मिन्छन् र हामीले आफ्नो जीवनलाई जटिल बनाउन पुग्छौं । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
फुर्सदिलो हुँदा या दिमाग खाली भयो भने दिमागमा अनेक सोंचहरु जन्मिन थाल्छन् । त्यसैले आफूलाई काममा व्यस्त राख्नुपर्छ । काममा व्यवस्त हुँदा दिमागमा सिर्जनात्मक सोंच जन्मिन्छन् । जसले गर्दा अनावश्यक सोंचहरुको लागि समय नै रहँदैन । हरेक कुरा ‘पर्फेक्ट’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्छ ।
आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको, जस्ताको तस्तै न त कुनै परिस्थिति हुन्छ, न त वस्तु या मान्छे नै । त्यसैले आफ्नो अगाडी आएको कुरालाई स्विकार्न सिक्नुपर्छ । वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ । व्यक्ति एक्लो हुँदा अनेक सोंच दिमागमा आउँछन् । त्यसैले एक्लै बसिराख्नु हुँदैन । सकारात्मक सोंच राख्ने साथीहरुको संगत गर्नुपर्छ । सामाजिक काम, समारोह आदि कार्यक्रममा सहभागी भइराख्नुपर्छ ।
मनोरंजनका साथै पुस्तकमा समय व्यतित गर्नु राम्रो हुन्छ । कुनै ठाउँमा बस्दा अनेक सोंच आएका छन् भने ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरमा बसिरहेको समयमा अनेक सोंच आउन थाले भने घर बाहिर निस्कनुपर्छ । यसले गर्दा दिमाग ती सोंचहरुबाट अन्यत्र मोडिन्छ । आफ्नो मात्र एकोहोरो सोंच राख्ने, आफू मात्र सही छु भन्ने भावना ल्याउनु हुँदैन । अरु व्यक्तिको दृष्टिकोण पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
कुनै कुराले सताएको छ भने अरु व्यक्तिको दृष्टिकोण अनुसार सुझाव लिनुपर्छ । दिमागमा धेरै कुरा खेल्न थाले भने आफ्नो रुचीको काम जस्तै, नाच्ने, चित्र बनाउने, लेख्ने, खेल्ने, मीठो परिकार बनाउने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दिमागमा नयाँ ऊर्जा आउँछ र अनावश्यक सोंच हराएर जान्छन् । शरीरमा कमजोरी महसुस भयो भने पनि दिमागमा नकारात्मक सोंच आउन थाल्छन् । त्यसैले खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यस्तै योग, मेडिटेसन, शारीरिक अभ्यासले अनावश्यक सोंच हटाउन मद्दत हुन्छ ।आफ्नो कोठा सफा गर्ने, आफू सफा रहने गर्नुपर्छ । आफ्नो ‘लुक्स’ मा समय-समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ , जस्तै कपाल काट्ने, लुगा फरक लगाउने आदि । मुस्कुराएर बोल्ने, कसैलाई देख्दा मुस्कुराउने गर्नुपर्छ । केही छिन हिंड्ने, हरियाली भएको ठाउँमा बस्ने गर्नुपर्छ । यी कुरा सानो लागेतापनि ठूला परिवर्तन ल्याउँछन् ।
रणवीरले आलियाको लेहंगालाई लात हानेपछि…
यूरिका राजभण्डारी - बुधबार, मंसिर १५, २०७८ ३:०५
बलिउडको सबैभन्दा राम्रो मानिएको जोडिमध्येमा पर्ने रणवीर कपूर र आलिय भट आउने वर्ष विवाह गर्दैछन्।